कालिनको राजिनामा, महर्जनलाई जिम्मेवारी – Khel Dainik
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा • राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित • दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा • उत्कृष्ट जितका साथ एपिएफ सेमिफाइनलमा • साविक विजेता काठमाडौं–११ माडी गोल्डकपको फाइनलमा •
कालिनको राजिनामा, महर्जनलाई जिम्मेवारी
मंसिर २५, २०७७ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएका छन् । कालिनले गत बर्षको जनवरीमा मात्र नेपाली टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनको राजिनामाबारे अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पनि पुष्टी गरेको छ ।
स्मरण रहोस, स्वीडिस प्रशिक्षक कालिनले कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत मार्चमा देशव्यापी लकडाउन हुनु अघि स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसयता उनी वर्तमान परिस्थितिका कारण नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्न फर्किन सकेका थिएनन् ।
बिहीबार एन्फाले कालिनको राजिनामाबारे जानकारी दिंदै उनको स्थानमा बालगोपाल महर्जनलाई अन्तरिम प्रशिक्षकका रुपमा नियुक्त गरेको छ । स्मरण रहोस, हालै नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपुर्ण अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्दा नेपाली टोलीको प्रशिक्षकीय जिम्मेवारी महर्जनले नै सम्हालेका थिए ।
टोली हाँक्ने महर्जनलाई चुनौति
प्रशिक्षक महर्जनले नेपाली टोलीको जिम्मेवारी यसअघि पनि सम्हालिसकेकाले उनलाई यो भूमिका त्यति नौलो भने हुने छैन । यद्यपि महर्जनमाथि ठूलो चुनौति भने बाँकी नै छ ।
नेपालले अब खेल्ने आगामी मैत्रीपूर्ण तथा आधिकारिक फुटबल खेलहरुमा महर्जनले प्रशिक्षकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । स्मरण रहोस, फिफा विश्वकप २०२२ र एएफसी एसियन कप २०२३ को छनौट प्रतियोगितातर्फ नेपालले घरमै अष्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी छ ।
विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावनाबाट बाहिरिसकेको नेपालले एसियन कप खेल्ने सम्भावना भने कायम छ । नेपालले छनौट प्रतियोगिता खेल्नु अघि थप अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्ने सम्भावना पनि छ ।
← राष्ट्रिय फुटबल टोलीको पुरुष र महिला खेलाडीहरुलाई समान पारिश्रमिक दिने राष्ट्र बन्यो नेपाल एन्फाद्वारा फिफा रेफ्रीहरुको पारिश्रमिकमा पनि बृद्धि →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर २५, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर २५, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर २५, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर २५, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर २५, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर २५, २०७७